ओलीको ‘पानीजहाज सपना’ मोदीले उद्घाटन गर्दै ! - Everest Dainik - News from Nepal
ओलीको ‘पानीजहाज सपना’ मोदीले उद्घाटन गर्दै !
नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार बनारसमा एक महत्वाकांक्षी योजनाको लागि पुगेका छन् । जहाँ उनी दुई विशाल भनिएका जलमार्ग योजनाको उद्घाटन गर्ने छन् । ‘मल्टी मोडल टर्मिनल’ नाम दिइएका दुई योजना उद्घाटनसँगै मोदीको योजनासँग बृहद अपेक्षा पनि गरिएको छ । जब कि, यी मार्ग गंगा नदी हुँदै ब्यापारिक मार्गको नयाँ र भारतकै सर्वाधिक लामो ब्यापारिक मार्ग हुन् ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख
प्रयागराज–हल्दिया जलमार्गको पूरा दूरी १ हजार ६ सय २० किलोमिटर छ । जुन परियोजना सम्पन्न भएपछि भारतकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो जलमार्ग हुने छ । स्मरणीय के छने, ब्रिटिश सरकारबाट भारत स्वतन्त्र हुनुअघि सोही मार्गलाई सामान ढुवानीको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो । सन् १९८६ मा दोस्रो पटक तत्कालिन भारत सरकारले उक्त योजनालाई सुरु गर्न खोजे पनि मोदी सरकारले उक्त परियोजनालाई ब्यूँताउन खोजेको हो ।
यस योजनासँगै भारतका चार राज्य पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार र उत्तर प्रदेश प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने छन् । ती चार राज्यमा २० टर्मिनल राखिएको यस जलमार्गको क्षमता १२ लाख टन हुने बताइएको छ ।
यसअघि नै भारत सरकारले वाटर–वे २०१६ को नीति वमोजिम देशका १ सय ११ जलमार्गलाई राष्ट्रिय जलमार्ग घोषणा गरिसकेको छ । जसको कुल लम्बाइ १४ हजार ५ सय किलोमिटर छ । यी सबै जलमार्ग सम्पन्न हुँदासम्म ६० हजार मानिसले रोजगारी पाउने सरकारले बताएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार
ट्याग्स: kp sharma oli, narendra Modi